Ungazikhuphela njani iividiyo zikaYouTube ngaphandle kweenkqubo | Iindaba zeGajethi
I-YouTube iyeyona ndawo iqhelekileyo kwizigidi zabasebenzisi xa kufikwa ekuphulaphuleni umculo abawuthandayo, ngaphandle kokunyanzelwa ukuba bakhuphele kwi-Intanethi okanye ngaphandle kokuhlawulela inkonzo yomculo esasazayo, kungoko uGoogle esungule eyakhe inkonzo yokusasaza umculo esekwe , ngokuyinxalenye, kwiividiyo zeYouTube.
Kodwa ayinguye wonke umntu osebenzisa eliqonga ukonwabela umculo awuthandayo, bayathanda ukonwabela iividiyo zamagcisa abo, izifundo zabo, imidlalo yokudlala, iimuvi, amaxwebhu ... kodwa kweli nqaku sikubonisa kuphela indlela yokukhuphela iividiyo zeYouTube ngaphandle kweenkqubo.
Njengoko besenditshilo ngentla, kubasebenzisi abaninzi eyona ndlela ikhawulezayo yokukhuphela iividiyo zikaYouTube zizicelo ezahlukeneyo esinokuzifumana kwi-Intanethi, usetyenziso uninzi lwazo, ubuncinci ezo zisinika ezona ndlela zibalaseleyo, zihlawulwe.
Nangona kunjalo, sinenye indlela yokwenza khuphela iividiyo zikaYouTube Ngaphandle kokukhuphela okanye ukuthenga nasiphi na isicelo somntu wesithathu, esiya kuthintela ukuba ekuhambeni kwexesha, izixhobo zethu ziqala ukuthoba isantya yonke imihla. Olunye ukhetho esinalo lokukhuphela iividiyo zikaYouTube kukongezwa, izandiso ezingafakwanga ndawo kwihard drive yethu kwaye zisinika, kwiimeko ezininzi, iziphumo ezigqwesileyo. Ukuba ufuna ukukhuphela ii-audios kuphela, ungandwendwela isifundo sethu ukuze wazi Ungawukhuphela njani umculo kwiYouTube.
5 Nyanzela uKhuphelo
Gcinafrom yenye yewebhu eyaziwa kakhulu xa ukhuphela iividiyo zeYouTube. Nangona kuyinyani ukuba ngokufaka oonobumba "ss" phambi kwe "YouTube.com/dirección-del-video" sinokufikelela ngokuthe ngqo kukhetho olukhutshelweyo olunikezelwa yile nkonzo, sinokukopa idilesi yewebhu yevidiyo kwaye uncamathisele. ngqo kwibhokisi eyenzelwe yona kwiwebhu savefrom.net
Okulandelayo, kufuneka khetha ifomathi (iaudiyo okanye ividiyo). Ngaphakathi kukhetho lwevidiyo, iSavefrom isinika zonke iifomathi kubandakanya nesona sisombululo siphezulu, esisisombululo esisengqiqweni apho ividiyo ilayishwe khona eqongeni.
Nje ukuba sikhethe isisombululo esifuna ukukhuphela ividiyo, kufuneka ucofe ku Khuphela. Gcina ukhumbula ukuba nini ukuphakama kwesisombululo sevidiyo, kokukhona esiba sikhulu isithuba ehlala kwihard drive yethu, ke kuya kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba sifuna ukwabelana ngayo kamva.
Ukusebenza kweYout kulula kakhulu, kuba kusenokwenzeka iyafana naleyo siyifumana kuSavefrom, nangona eyokugqibela isaziwa ngcono kodwa ngenxa yeso sizathu ayingcono. Ngamaxesha amaninzi, sinokufumana ezinye iindlela ezilinganayo okanye ezingcono ezingakhange zibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba zibe yimpumelelo.
Ukukhuphela ividiyo ngqo kwiqonga levidiyo kaGoogle, kufuneka nje susa oonobumba "ube" kwidilesi kwaye ucinezela u-Enter. Okulandelayo, iwebhusayithi yeYout iya kuvula ngeendlela ezahlukeneyo zokukhuphela ezisinika zona.
Idilesi yokususa "ube" ingabonakala ngoluhlobo: https://www.yout.com/watch?v=uQg8yLTw0rk
Eli qonga alisivumeli kuphela ukukhuphela iividiyo, kodwa ivumela ukuba sikhuphele iaudiyo kwifomathi ye-mp3 nakwifomathi yeGIF. Ukuyikhuphela kwifomathi yevidiyo, ngokungagqibekanga ukhetho lwe-mp3 luhlala luvela, kufuneka ucofe kwithebhu yevidiyo kwaye usete umgangatho wokukhuphela.
Ukuba asifuni ukukhuphela yonke ividiyo, sinokusetha ukusuka kowuphi umzuzu nowesibini sifuna ukhuphelo luqale. Singaseta kwakhona ukuba yeyiphi umzuzu kunye neyesibini esifuna ukuyikhuphela ividiyo. Emva koko, kufuneka simisele igama levidiyo esiza kuyikhuphela kwaye ekugqibeleni ucofe irekhodi le-MP4.
Esinye sezisombululo ezibalaseleyo esinazo kwi-Intanethi ukukhuphela iividiyo zeYouTube ngaphandle kokusebenzisa izicelo zomntu wesithathu siyifumana kwiClip Converter. Umsebenzi ulula kakhulu kwaye awufuni ukuba sithiye ngokutsha idilesi yewebhu yevidiyo okhetho lokukhuphela ukuba luboniswe.
Ukusuka kwiwebhusayithi yeClip Converter uqobo, kufuneka singenise idilesi yewebhu yevidiyo ye-YouTube esifuna ukuyikhuphela. Khetha nokuba ngaba yeaudio okanye ividiyo kunye nefomathi yayo. Njengokuba singamisela ukusuka apho sifuna ukuba ividiyo ikhutshelwe khona kude kube ngumzuzu kanye, umsebenzi ofanelekileyo ukuba asifuni ukukhuphela ividiyo epheleleyo. Nje ukuba simisele ezi ndlela, kufuneka ucofe ukhuphelo.
Olunye ukhetho esinalo lokukhuphela iividiyo lubizwa AmoyI. Ngokungafaniyo nezinye iindlela, U-AmoyShare akafuni ukubenza nzima ubomi bethu kwaye ayiboneleli ngokhetho xa kuziwa ekukhupheleni ividiyo esizithandayo zeYouTube.
Nje ukuba singenise i-URL yevidiyo esifuna ukuyikhuphela kwi-YouTube, kuya kuvela iindlela ezimbini: Dlala kwaye ukhuphele. Xa ucofa uKhuphelo, kuya kufuneka khetha ukuba sifuna iaudiyo okanye ividiyo. Kwimeko yevidiyo, isinika kuphela iindlela ezimbini zokusombulula: i-720p kunye ne-360p. Ngokucofa kulowo uhambelana neemfuno zethu, ukhuphelo luya kuqala.
Inkonzo elula kwaye ngaphandle kokhetho esinokukhuphela nawuphi na umxholo kwi-YouTube yile Nyanzela uKhuphelo, inkonzo apho kufuneka sincamathisele idilesi yewebhu yevidiyo esifuna ukuyikhuphela kwaye ucofe kwi-MP4, ifomathi kuphela esinika yona yokukhuphela iividiyo. Ngelo xesha umncedisi uza kuqala ukukhuphela ividiyo. Xa sele ukhutshiwe, kuya kufuneka ucofe kwi-Download MP4.
Olokugqibela ukhetho esiza kukubonisa kulo kweli nqaku ukukhuphela iividiyo zeYouTube ngaphandle kokusebenzisa umntu wesithathu QDownloader. Njengazo zonke iinkonzo, kufuneka kuqala sikope idilesi yevidiyo esifuna ukuyikhuphela ukuze siyincamathisele kamva kwifayile ye- QDownloader iwebhusayithi.
Nje ukuba sincamathisele iphepha levidiyo likaYouTube, kufuneka sizikhethe zombini isisombululo njengefomathi esifuna ukuyikhuphela. I-QDownloader isivumela ukuba simisele ukuba sifuna ukukhuphela ividiyo kwifomathi ye-mp4 kunye ne-3gp. Ikwasinika ithuba lokuguqula ividiyo ekhutshelweyo kwifomathi ye .avi okanye .flv.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungazikhuphela njani iividiyo zikaYouTube ngaphandle kweenkqubo